Shiinaha DIN933 darajo bir ah oo fudud 4.8 Hex bool soo saarayaasha iyo alaableyda. Fiilooyinka Tianbang
Dhererka waxaa laga cabiraa barta uu madaxu si siman ugula fadhiisto dusha sare, ilaa cirifka dunta. Hex, pan, truss, badhanka, daboolka godka, iyo boogaha madaxa wareega waxaa laga cabiraa midigta hoosteeda hoosteeda ilaa dhamaadka siligyada. Boolalka madaxa ee fidsan waxaa laga cabiraa madaxa kore ilaa cirifka dunta.
Shayga Hex bool
Wax soo saarka ugu weyn DIN931 DIN933
Oogada Plain / Black / Zinc plated / HDG / Dacromet
Heerka DIN GB ISO ANSI / ASME BS Heer aan caadi ahayn
Fasalka 4.8 8.8 10.9 12.9
Wax ceyriin Q235, Q195,1035,1045,20MnTiB, 35Crmo
Shahaadada ISO9001, SGS
Xirmo 5kg, 10kg, 25kg kaarboon / boorso + sariir ama la habeeyay.
Dekedda Loading Dekedda Tianjin, dekedda Qingdao, kuwo kale
Codsiga qalabka wax lagu xiro, mashiinka, dhismaha, budada, jidadka tareenka, qalabka korontada ee guryaha iwm.
Heerarka aan caadiga ahayn OEM waa la heli karaa haddii aad bixiso sawirro ama shaybaarro.
Xirfadle Waxaan xirfad ugu jirnaa badeecadaha dhejiska in ka badan 15 sano
Goobta Asalka Yongnian, magaalada Handan, gobolka Hebei, Shiinaha
Adeeg Tijaabooyin bilaash ah
Habka wax soo saarka Qalabka ceyriin-silig sawir-qabow abuur-dusha daaweynta-tijaabinta-xirxirida-rarka
Waqtiga dirida Iyada oo ku saleysan tirada amarka
Qalabka Tijaabada qalbi adayga, tijaabada culeyska, tijaabada adkeysiga buufinta milixda, imtixaanka cabbirka farsamada, shahaado bixinta iyo wixii la mid ah
Nidaamka kormeerka Xakamaynta tayada soo socota Control Xakamaynta Tayada Hawsha Control Xakamaynta Tayada Kama Danbaysta ah Xakamaynta Tayada Hore
Tilmaamo badan oo ku saabsan boolida
(1) Sidee loo cabiraa bool hex ah?
(2) Maxaa loo isticmaalaa handarraabbadeedii hex?
Hex bolts, ama hex cap cap boolal, waa boolal waaweyn oo leh madax lix geesood ah (hexagonal) oo loo isticmaali jiray in lagu xareeyo alwaaxda qoryaha, ama birta qoryaha.
(3) Sideed uga saareysaa booska hex?
U adeegso dubbe si aad ugu garaacdo furaha hex-key ee xaaladaha daran. Ku shub xoogaa dhibco ah saliidda guriga ama ku buufi tallaal ah saliidda aerosol madaxyada fur ee aan dabacsanayn qalabka dheeriga ah. U oggolow 20 daqiiqadood saliida inay ka dhex shaqayso inta u dhexeysa dunta ka hor inta aan la isku deyin ka saarista.
Tijaabada alaabta iyo xirmada
Q1: Ma waxaad ka ganacsataa shirkad ama soo saare?
J1: Waxaan nahay warshad.
Q2: Ma booqan karaa warshaddaada?
J2: Haa! Si diiran u soo dhawow inaad soo booqato warshadeena. Way fiicnaan laheyd haddii aad horay noogu soo sheegto.
Q3: Tayada alaabtaada?
A3: Shirkaddu waxay leedahay qalab wax soo saar iyo tijaabineed oo horumarsan .Badeecooyin kasta waxaa 100% kormeeri doona waaxdeena QC ka hor inta aan la rarin.
Q4: Sidee ku saabsan qiimahaaga?
A4: Alaab tayo sare leh oo qiimo macquul ah leh. Fadlan wax i sii weydiin, waxaan kuu soo qaadan doonaa qiime aad hal mar tixraacdo.
Q5: Ma bixin kartaa shaybaarro bilaash ah?
J5: Waxaan ku siin karnaa shaybaarro bilaash ah dhejiska caadiga ah, Laakiin macaamiisha ayaa bixin doona kharashka Express.
S6: Waa maxay Waqtiga Gaarsiintaada?
A6: Waxay kuxirantahay tirada. Waxaan u sameyn doonaa gaarsiinta sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah tayada dammaanadda.
S7: Sideen ku dalban karaa oo u bixin karaa?
A7: By T / T, muunado 100% leh amarka; soosaarka, 30% waxaa lagubixiyay dhigaalka T / T kahor diyaarinta waxsoosaarka, dheelitirka labixinayo kahor rarka.
Hore: DIN 125 Flat dhar dhaqe Zinc steel steel zinc dahaadhay
Xiga: galvanized 8. DIN934 Hex lowska kaarboon birta madow
Hex Bolt culus
Bolt isku xidhka Nut, Hex Socket Head Bolt, Dhagaha Dhagaha, Hex Socket Bolt, Aargoosyada aasaaska aasaasiga ah, Barroosinka Hoolka Birta ee Cadaadiska ah,